अजय दीक्षित - नेपाल
अजय दीक्षितका लेखहरु
जलवायु परिवर्तनको प्रभावसित जुध्न मानव जातिसामु तीन विकल्प छन्- हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गर्ने, परिवर्तित अवस्थासित अभ्यस्त रहने र जे पर्छ, त्यही बेहोर्ने अर्थात् नसक्नेहरु भासिँदै जाने ।
अजय दीक्षित, वैशाख १८, २०७६
हाम्रा हिमाललाई फुस्रो हुन नदिन कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्नैपर्छ र यसको मुख्य जिम्मा धेरै उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूको हो । नेपालको कुल कार्बन उत्सर्जन खासै छैन भन्ने तर्कचाहिँ गर्ने तर ठाडो घाँटी लगाएसरह खनिज-तेल आयात गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।
अजय दीक्षित, फाल्गुन १६, २०७५
वातावरणीय संवेदनशीलतासहित समतामूलक समृद्ध भविष्यतर्फको यात्रामा ह्रास नल्याई पानीको भूमिका कसरी निरन्तर राख्ने ?
अजय दीक्षित, भाद्र ५, २०७५
म लर्खराउँदै निकुञ्जको सूचनापाटी अगाडि पुगेँ र पढ्न लागेँ : प्लास्टिक कप गल्न २ सय ५० वर्ष लाग्छ ।
अजय दीक्षित, वैशाख २५, २०७५
दुर्घटना किन भयो ? कस्ता पाठ सिक्नुपर्छ ? के सुझाव दिइयो ? त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिई हवाई यात्रा सुरक्षित राख्न सरकार एवं राज्यका अंगहरूले के–कस्ता नीति लिनुपर्छ ?
अजय दीक्षित, चैत्र ९, २०७४
अंग्रेजीमा टुक्का छ, ‘अ पिक्चर इज वर्थ ए थाउजेन्ड वर्डस्’ अर्थात् एउटा चित्र हजार शब्दसरह हुन्छ । विभिन्न अवधारणालाई सहज रूपमा बुझ्न तस्बिर सहयोगी हुन्छ । यही सन्दर्भमा, आफ्नो करिब दुईवर्षे ट्वीट यात्रामा मैले पछ्याउने एउटा ट्वीटर ह्यान्डल हो, नेपाल इन पिक्स ।
अजय दीक्षित, पुस २१, २०७४